Caalamka, 03 February 2019
Axad 3 February 2019
Xulufada Sacuudiga oo u hanjabay Xuutiyiinta
Xulufada Sacuudiga uu hogaamiyo ee dalka Yemen ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay awood adeegsadaan si ay ugu qasbaan Xuuitiyiinta inay u hogaansamaan xabad joojinta magaalada dekedda leh ee Xudaydah.
Wariye ku xirneyd Mareykanka oo lagu soo dhaweeyay Iran
Wariye Mareykanka ku dhalatay oo ka howl gasha TV-ga afka dowladda Iran ku hadla, ayaa dib ugu laabatay Iran kadib markii muddo ka badan isbuuc ay ku xirneyd Mareykanka.
Britain iyo Midowga Yurub oo is mari la'
Midowga Yurub oo Diiday Dalabka May
Hogaamiyaasha Midowga Yurub ayaa meesha ka saaray iskudayga ay Ra’isulwasaaraha Britain Theresa May ku rabto in ay mar kale dib ugala xaajooto ka bixista Ingiriiska ee Midowga Yurub bisha March.
Brazil: Dad badan oo ku dhintay biyo-xireen dumay
Korneel ka Goostay Dawladda Venezuela
Colonel Jose Luis Silva oo ahaa u qeybsanaha dhinaca millatariga ee safaaradda Venezuella ay ku leedahay magaaladan Washington ayaa muuqaal Video ah oo Sabtidii shalay uu baahiyay ugu baaqay ciidanka qalabka sida in Juan Guaido ay u aqoonsadaan madaxweynaha Venezuella
RW Trudeau oo Danjirihiisii Shiinaha Shaqada ka Eryey
Danjire McCallum ayaa Talaadadi kusoo baxay cinwaannada hore ee warbaahinta, kaddib markii uu ka hadlay kiiska xasaasiga ah ee ay dowladda Mareykanka ku rabto in loogu soo gacan-geliyo Meng Wanzhou oo ah haweeneey u dhalatay dalka Shiinaha, taasoo tan iyo bishii December ku xiran magaalada Vancouver
AP: Sacuudiga iyo Gantaaladda Ballistiga
Dalka Sacuudiga, Khubarro iyo Muuqaallo dhinaca setalite-ka ah ayaa muujinaya in saldhig military oo ku yaalla gudaha Sacuudiga uu u muuqdo mid lagu sameeeyo laguna tijaabiyo gantaallada nooca balaastikada ah ee xanbaari kara hubka nuclear-ka.
Wadahadallada Taliban iyo Maraykanka oo horumar sameeyey
Wararka ka imanaya dalka Qadar ayaa sheegaya in wadahadalladii toddobaadkan u socday Maraykanka iyo Taalibaanka laga sameeyey xoogaa horumar ah. Wadahadalladan ayaa lagu tilmaamay kuwo xasaasi ah.
Baarlamanka UK oo loo gudbiyey warbixin la xiriirta Somalia
Waaxda House of Commons Library oo baarlamanka UK la wadaagta cilmi-baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda ayaa soo bandhigtay warbixin looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya.
Dadaallo lagu sii daynayo Roobow oo socda
Dadaallo lagu sii daynayo Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo u xiran dowladda Soomaaliya ayaa ka socda magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay.
Wada-hadallo u furmay Mareykanka iyo Taliban
Kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday in wareeg cusub oo wada-haddallo nabadeed ah oo ay la leedahay Mareykanka uu Isniintii ka furmay dalka Qatar.